स्थायी सरकारका लागि बाम गठबन्धनलाई भोट « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति :3December, 2017
मेरा पिताजीले २००७ साल माघमा वीरगञ्ज नजिकैको रक्सौल नाकाबाट नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट १८ दिन जेल खाएको घटना अरूका लागि महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ तर मेरो परिवार र मष्तिष्कका लागि निकै महत्त्व राख्दछ । भारतको मुम्बईबाट बहुदलवादी पर्चा बोकेर रक्सौल नाकाबाट नेपाल छिर्न खोज्दा उहाँसँगै दुईजना समातिएको कुरा पिताजीले राजनीतिक कुरा गर्दा सधैंजसो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र आएपछि उहाँ काठमाडौंको जेलजीवनबाट मुक्त हुनुभयो । उहाँलाई अहिलेकाजस्ता प्रहरीले नभई राणाहरूको सैनिक डफ्फाले पक्राऊ गरेको कुरा पनि उहाँले नछुटाई भन्नुहुन्थ्यो । त्यतिबेला अहिलेका प्रहरी थिएनन् रे । पिताजीले पञ्चायत आउनुमा काँग्रेसकै हात रहेको कुरा पनि भन्नुहुन्थ्यो । उहाँले त तत्कालीन राजाका राजनीतिक गुरु विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नै भएको बताउनुहुन्थ्यो । शिष्यले सबैकुरा जानेपछि विपीकै सल्लाहमा पञ्चायत ल्याएको भन्नुहुन्थ्यो । तर २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनमा पिताजी कुनै राजनीतक पार्टीमा सक्रिय नभएपनि उहाँले अब यो मुलुक कांग्रेसबाट चल्न सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो । उहाँले मुलुकले गति लिनका लागि कम्यूनिष्ट पार्टीबाट मात्रै सम्भव छ भन्दै कम्यूनिष्ट बन्न सल्लाह दिनुहुन्थ्यो । राजनीतिमा अगाध रुची लिनुभएका पिताजीले जर्मन, जापान, रुस, बेलायत, अमेरिकाका कुराहरू खुबै गर्नुहुन्थ्यो । चीन र भारतका कुराहरू त दैनिक चिया गफमा नै गर्नुहुन्थ्यो । बर्लिनको पर्खाल भत्काइएका कुरा, लेनिनले गरेको अक्टोबर क्रान्ति र जार शाहको पतनका कुरा, बेलायत र जापानको विश्वयुद्धका चर्चाहरू त पिताजीका लागि सरल कहानी नै बनिसकेका हुन्थे । उहाँबाट राजनीतिक र व्यवहारिक शिक्षा लिन चाहनेहरूका लागि त दिनभरिजसो नै यी चर्चाहरू गर्ने गर्नुहुन्थ्यो ।
घरको एउटा मुलीले त घरायसी नीति नियमको पालना गर्छ भने राणाहरूको जस्तै बोलि नै कानून बनाउने र तोकादेशका भरमा देश चलाउन खोज्ने आदरणीय देउवा जी का दिन सकिएकै हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेजस्तै काँग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर त भन्न सकिन्न तर काँग्रेसका लागि शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीका अन्तिम उम्मेदवार र निवर्तमान बन्ने सभापति हुन् जस्तो छ ।
त्यतिबेला यी कुराको त्यति महत्त्व नराखेपनि सामान्य चासो दिने गरिन्थ्यो । जहाँनियाँ राणा शासनको अन्त्य भएर नेपाली काँग्रेसको मुद्दामा २००७ सालमै मुलुक अगाडि बढ्यो । नेतृत्वको असक्षमता र नीति कार्ययोजना बिनाको पार्टी र त्यसको नेतृत्वको कारणले नत पार्टीले नै गति लियो नत मुलुकले नै । बरु नेपालका सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूमा सन्धी सम्झौता भएपछि विवादका विषयहरू बन्दै गए । २००७ सालदेखि २०१७ साल नआउँदासम्म सरकार फेरबदलका घटना परिघटनाहरू हुँदै गए । शक्तिशाली काँग्रेस पार्टी केवल निरीह र मुकदर्शक भएर बस्यो । विश्वमा स्वतन्त्र भएका मुलुकमा सबैजसो मुलुकहरू बिना रक्तपात वा सशस्त्र युद्ध बिना स्वतन्त्र भएका होइनन् । अत्याचारी शासकहरू भएपनि जनताले बिद्रोह गर्दै सशस्त्र आन्दोलन गरेपछि मात्रै सशस्त्र फौज भएका तानाशाहहरू डराएर सत्ता छाडेका हुन् । कतिपय मुलुकमा भने शासकको अन्त्य नै गरेर नयाँ शुत्रपात गरिएको हो । हुन त छिमेकी मुलुक भारतमा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनको बढी चर्चा हुने गर्दछ तर केवल अहिंसात्मक आन्दोलनले मात्रै भारत स्वतन्त्र भएको होइन । नेताजी सुभाषचन्द्र वोस र भगत सिंह जस्ता क्रान्तिकारी नेताहरूले चलाएको सशस्त्र आन्दोलनबाट डराएका बेलायती शासकहरूले शासन लम्ब्याउन नसकिने स्थिति भएपछि भारत छोडेका हुन् । त्यही सेरोफेरोमा नेपालमा पनि सशस्त्र र शान्तिपूर्ण दुवै आन्दोलनहरू भए । जनताको सहभागितामा भएका ती आन्दोलनहरूबाट डराएका राणाशासकहरूले टिक्न नसक्ने भएपछि आन्दोलनकारी, राजा र भारतसंग सम्झौता गर्दै पलायनको बाटो रोजे । त्यसपछि २०१७ सालसम्म कांग्रेसकै वरिपरि मुलुक घुमेपनि निकास लिन सकेन परिणामत: पञ्चायतको आगमन भयो । जनताका हक अधिकार कुल्चिएपनि केही विकास निर्माणका कामहरूका थालनी पञ्चायतकालमा भए । जुन तत्कालीन शासकहरूले नगरी नहुने पनि थियो । राजमार्गहरू निर्माण कार्यदेखि लिएर जापान लगायतका विभिन्न मुलुकको सहयोगमा ३८ वटा सरकारी उद्योगहरू सञ्चालनमा आए । नेपालसँगै स्वतन्त्र भएका अन्य मुलुकहरूले विकासे फड्को मार्न थालेपनि नेपाल केवल मार्ने सर्न मात्र थाल्यो । सिंगापुर, स्वीजरल्याण्ड लगायतका मुलुकहरू नेपालसंगै स्तन्त्र भएपनि विश्वकै विकसित राष्ट्रमा गनिन थालेभने नेपाल केवल गोरेटो कोर्दै अगाडि बढ्यो । जनताको जीवनस्तर जहाँको त्यही रह्यो । यी विभिन्न कार्यले गर्दा आजित जनताले नेपालको राजनीतक परिवर्तन मात्रै बाधक भएको निष्कर्ष निकाल्यो र कांग्रेस तथा कम्यूनिष्ठहरूले चालेको आन्दोलनलाई साथ दिएर २०४६ सालमा पुन: बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरिदियो । तर जनताका आशा र अपेक्षालाई कत्ति पनि सम्बोधन गर्न सकेन । यसको दोष नेपाली काँग्रेसलाई नै जान्छ । २०४८ र २०५४ को आम निर्वाचनमा पूर्ण बहुमत दिएर पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउन जिम्मा दिएका नेपाली जनतालाई आफ्नो सरकार आफै बर्खास्त गर्ने, सांसद किनबेच गर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा बेथिति मच्चाउने, ठेक्कापट्टामा केवल कमिशकनो खेल मात्रै गर्ने जस्ता उत्पाद र जनताका चाहनामा मनोवैज्ञानिक आतंक सिर्जना गरी निरास र आन्दोलित पार्ने खालका कार्यहरू गरिए । राजनीतक आस्थाको आधारमा विारोधीहरूलाई पुर्वाग्रही भएर सामाजिक न्याय नदिने, बहुमतको दम्भमा गाउँगाउँमा कार्यकर्ताहरू परिचालन गरेर कुटपिट गर्ने कमिशनको विरोध गर्दा कुटाई खानुपर्ने, सुरक्षा निकायको दुरुपयोग गरी राजनीतिक विरोधीहरूलाई सिध्याउने, आमसभामा विपक्षी उम्मेदारलाई गोली हान्नेसममका कर्तुतहरू हुन थालेपनि त्यही अराजकताको पराकाष्ठा सहन नसकेपछि देशमा जनयुद्धको थालनी गर्ने निर्णय गरेको माओवादीले नेपाली जनताले साथ दियो । मुलुक ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्न पुग्यो १७ हजार नेपालीहरूको बलिदानी भयो, फलत: आजको मुलुक संघीय गणतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्यो ।
हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारत आज विश्वका महाशक्ति बनिसकेका छन् । उनीहरूकै हाराहारीमा नेपाल पनि स्वतन्त्र भएका थियो । भारतको यानले आज मंगलग्रहमा फन्को मारिरहेको छ भने चीनको यानले आज चन्द्रमामा फन्को मारिरहेको छ । जल, स्थल र वायुको क्षेत्रमा उनीहरू शक्तिशाली बन्दै गएका छन् । चीन विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र भएको देशमा गनियो भने भारत त्यस दिशातर्फ तीब्र गतिले दौडिरहेको छ । बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएको भारत र जापानको नियन्त्रणमा पुगिसकेको चीन आज हरेक किसिमले संसारमा नमुनाका रूपले अगाडि बढेका छन् । ती विशाल मुलुक मात्रै होइन, सानो एशियाली मुलुक सिंगापुर र यूरोपियन मुलुक स्वीट्जरल्याण्ड पनि आज आफ्नालाई सबल अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सूचीकृत गर्न सफल भएका छन् । तर अपार जलस्रोतको धनी, प्राकृतिक सम्पदा र खनिजतत्त्वले भरिएको नेपाल आफैमा धनी भएर पनि त्यसको उपयोग गर्न र गराउन नसक्दा आज विश्वमै ओरालो लागेको अवस्थामा छ । आखिर यसको दोष कसलाई जान्छ त राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका शासकहरूलाई । २०४७ पछि नै पञ्चायतकालमा निर्माण गरिएका ३८ वटा राष्ट्रिय उद्योग कारखानाहरू समाप्त पारिए । आज नेपाली जनता हरेक कुराले परनिर्भर बन्न गएको छ । प्रजातन्त्रको पुर्नवाहलीपछि नेपाली काँग्रेसलाई देश चलाउने जिम्मा नेपाली जनताले दिएकै हो, तर खोई उसले जनताको मनोभावनाको कदर गरेको ? अब जनताले उसलाई भोट होइन सजाय दिनुपर्दछ । आफू केही गर्न नसक्ने अर्कोले गर्न आँटेमा बेतुकको हल्ला गर्दै हिँड्ने ।
म मिशन पत्रकारिता गर्ने मान्छे पनि हुँ । यतिबेला मुलुक धरापमा परिरहेको छ भने त्यसलाई माथि उठाउनका लागि जनतालाई जगाउने मेरो फर्ज वा कर्तव्य पनि हो । डुंगा डुब्दै गर्दा उद्धार गर्न छोडि तस्बि लिएर प्रकाशित वा प्रसारित गर्ने मेरो पत्रकारिताले दिँदैन, मैले बुझेको र जानेको पत्रकारिताले दिँदैन । मैले तस्बिर बेचेर पाउने रकमभन्दा डुंगामा बसेका मानिसहरू बचाएर पाउने कार्य नै अमूल्य हुन्छ । जसको किमत मिल्दैन तर आनन्द मिल्छ । मर्ने बेलासम्म मेरो त्यस कार्यले पश्चाताप नभई सन्देश दिएर मर्ने प्रेरणा दिन्छ । केवल रकम पैसाको लागि गरिने पत्रकारिताले एउटा सत्य समाचार बेचेर वा प्रकाशित नहुँदै मोलमोलाई गरेर आर्थिक कमाउन सक्छ तर मेरो पत्रकारिताको धर्मले त्यसो हुन दिँदैन । त्यसैले अरुले गर्ने र बुझ्ने पत्रकारिताभन्दा मेरो बुझ्ने र गर्ने पत्रकारिता भिन्न छ । मदिरा खाएकै र खुवाएकै भरमा कलम चलाएर गुणगान गाउँदै चल्ने कलमभन्दा मेरो विवेकले चल्ने कलम अलि भिन्न छ । यहाँ यो कुरा मैले किन उठाए भने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले देशका विषयमा एकढिक्का भएर लाग्ने गरेका छन् तर नेपाली मिडिया राष्ट्रियताका सवालमा पनि विभाजित भएर उठ्ने गर्दछ ।
वतन र नाम नखुलेका व्यक्तिजस्ता नीति, कार्ययोजना नभएका क्षेत्रीयता, जातीयता र भेगियतामा चल्ने विखण्डनकारी, विभाजनकारी पार्टी र व्यक्तिहरूलाई समेत यसै निर्वाचनबाट पाखा लगाएर ‘सबैको नेपाल सबैका लागि’ बनाउनु सम्पूर्ण नेपालीहरूको दायित्व र कर्तव्य हो ।
यतिबेला काम चलाऊ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जी हुनुहन्छ । उहाँले गरेको हर्कत हेर्दा लाग्छ उहाँ मनोरोगी नै हुनुभयो कि क्या हो । आठजना एआईजीहरू थप्ने विधि प्रक्रिया र नियम कानून छ कि छैन, कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवाको नियम कानून छ कि छैन । जे मनमा लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ । उहाँलाई सकेले त्यो अपधिकार दियो । कित उहाँले आफ्रलाई नयाँ राजा ठान्नुभएको हो । कित देउवाजीले संविधान र ऐन कानूलाई आफ्नो घरको कागजको खोस्टो ठान्नुभएको छ । उहाँ यस्ता हर्कतले सामान्य आदर गर्न लायक पनि रहनुभयो कि भएन । कम्यूनिष्ट आएमा अधिनायकवाद आउँछ भनी भाषण ठोक्दै हिँड्ने उहाँले गरेका यस्ता हर्कतले कुन वाद झल्काएको छ । उहाँका हर्कतले त लाग्छ अधिनायकवाद शुरु भइसक्यो । उहाँ नै अधिनायकवादको प्रमाण हो । प्रदेश नं ७ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा १६ सिटमध्ये १ सिट मात्र कोइराला–पौडेल खेमालाई दिएर पार्टीभित्र अधिनायकवाद चलाएका देउवाजीले अब मुलुकमा अधिनायकवाद लाद्न थाल्नुभएको हो त । अरूलाई कम्यूनिष्ट आएपनि रून पाउँदैनन् भन्नेले कुन कानूनी राज्यको पालना गर्नुभएको छ र ? संविधान विपरित जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन, पार्टी संगठनमा गरिएको नियुक्ति पक्रिया र आसन्न निर्वाचनमा दिइएको उम्मेदारीको टिकट वितरणजस्ता कार्यमा उहाँले नै अधिनायकवाद लादेर काँग्रेसलाई यो लोकतान्त्रिक पार्टी होइन भनेर नेपाली जनता र विश्वलाई सन्देश दिन खोज्नु भएको होर ? पार्टी पनि संविधानत: चल्नु पर्दछ नत्र त्यउस्ता पार्टी खारेज गर्ने अधिकार संविधानलाई छ, नेपाली जनतालाई छ । देउवाजीका यस्ता हर्कतले अब नेपाली जनताले सरकारमा बहुमत बाम गठबन्धनलाई दिने र प्रतिपक्षमा अर्को नयाँ पार्टीलाई स्थापित गर्ने दिशातिर केन्द्रित भएको देखिन्छ । जुन पार्टीमा आन्तरिक लोतन्त्र हुँदैन त्यसलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्न जरुरी छैन बरु राजाको समयको प्रजातान्त्रिक भनिरहन केही फरक पर्दैन । किनभने प्रजा भनेको रैती हो जहाँ रैती हुन्छ त्यहाँ राजा पनि हुन्छ । तिनै रैतीलाई ठगठाग गरी खानेहरूले प्रजातान्त्रिक आफूलाई भनिरहँदा कसैलाई आपत्ति हुँदैन पनि तर नेपाली कांग्रेस नत लोकतान्त्रिक रह्यो नत नेपालीको नै रह्यो । लोकतन्त्रमा आजीवन सत्तामा रहने र मनपरी गर्ने परिपाटी नै खासमा अधिनायकवाद हो । तत्कालीन प्रजातन्त्र राजालाई बुझाउने आरोप लागेका देउवाजीले यतिबेला पनि राजा भएको भए त्यो कार्य गर्ने नै थिए भन्ने देखिएको छ । अझैपनि यिनले सेनालाई बुझाउन सक्ने खतरा टरेको छैन । घरको एउटा मुलीले त घरायसी नीति नियमको पालना गर्छ भने राणाहरूको जस्तै बोलि नै कानून बनाउने र तोकादेशका भरमा देश चलाउन खोज्ने आदरणीय देउवा जी का दिन सकिएकै हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेजस्तै काँग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर त भन्न सकिन्न तर काँग्रेसका लागि शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीका अन्तिम उम्मेदवार र निवर्तमान बन्ने सभापति हुन् जस्तो छ ।
त्यसैले पहिले पिताजीले भनेजस्तै अब यो मुलुक बनाउने जिम्मा नेपाली जनताले बाम गठबन्धनलाई दिँनै पर्दछ । एउटा सदन र सडकमा जनतामाझ लोकप्रिय भएर आफ्ना मुद्दा स्थापित गरेको पार्टी अर्को जनताकै आडमा जनयुद्ध सञ्चालन गरेर मुलुकको आमूल परिवर्तनको संवाहक पार्टी यी दुर्व पार्टीको मिश्रणबाट मात्रै अब नेपालले गति लिन सक्छ । नेपाली जनताका घरदैलोमा चुनावको समयमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि पुग्ने गरेका यी दुई दलका नेताहरूले आगामी दिनमा एउटै पार्टी निर्माण गरी जनताका चाहनालाई चाडोभन्दा चाँडो पूरा गर्ने वाचाका साथ आएका हुनाले यसपटक बाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो मत प्रदान गरी मुलुकको मुहार फेर्नका लागि सबै नेपाली जनताले अग्रसर हुन जरुरी छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाजीका तानाशही शैलीका यस्ता हर्कतहरूमा लगाम लगाउन पनि अब बाम गठबन्धनको अत्यधिक सरकार अपरिहार्य छ । वतन र नाम नखुलेका व्यक्तिजस्ता नीति, कार्ययोजना नभएका क्षेत्रीयता, जातीयता र भेगियतामा चल्ने विखण्डनकारी, विभाजनकारी पार्टी र व्यक्तिहरूलाई समेत यसै निर्वाचनबाट पाखा लगाएर ‘सबैको नेपाल सबैका लागि’ बनाउनु सम्पूर्ण नेपालीहरूको दायित्व र कर्तव्य हो । नेपाललाई राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, औद्योगिक, व्यापारिक दलालहरूको पञ्जाबाट छुटाएर स्वाभिमानी नेपाल बनाउनका लागि पनि बाम गठबन्धनको बहुमतको सरकार आजको आवश्यकता हो ।